IHuawei sele ilolona hlobo lwesibini luthengisa kakhulu | I-Androidsis
Abenzi beefowuni aba-5 abaphezulu abathengisa ezona fowuni kwihlabathi jikelele bezizinzile ixesha elithile. Isamsung ekukhokeleni, iApple kwindawo yesibini emva koko iHuawei njengeyesithathu kuluhlu. Nangona ngo-2018 sibona utshintsho kwezi ntengisonjengoko umenzi waseTshayina esenza inkqubela phambili enkulu kwimarike zehlabathi.
IHuawei iyazingqina njengokhuphiswano oluphambili lweSamsung kwimarike yamanye amazwe. Uhlobo lwesiTshayina sele idityanisiwe njengophawu lwesibini oluthengisa kakhulu kwihlabathi liphela ngokweentengiso. Amanani amatsha avela kwi-Counterpoint ayakuqinisekisa oku.
Ukuthengiswa kweefowuni kwihlabathi liphela kwikota yesithathu yalo nyaka sele kutyhilwe. IHuawei ikwindawo yesibini ngokuthengisa iifowuni ezizizigidi ezingama-52, emele ukwanda kweepesenti ezingama-33 xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo. Inani elicacisa inkqubela phambili yohlobo lwe-2018.
Isamsung ihlala iyinkokeli, kodwa ilahlekile i-13% yentengiso ngokuthelekiswa nekota enye yonyaka ophelileyo. Ngelixa iApple iye yehla yayokwesithathu, ngokuthengisa ngokufanayo nakula nyaka uphelileyo. Zimbalwa iinguqu kule meko. Kukuhamba phambili kweHuawei, kunye nokuphela kwayo okuphezulu entlokweni, eyona ibalulekileyo.
Olunye uphawu olukhula ngokukhawuleza yiXiaomi. Uphawu lwaseTshayina lukwandise ngokupheleleyo amazwe aphesheya, into enefuthe ngqo kwintengiso yayo, ebakhokelele kwinqanaba lesine kwihlabathi liphela. Enye yeempawu ezonyuse kakhulu, njengoko ubona kwiigrafu, yi-HMD, umnini weNokia. Ukuthengisa kwayo kunyuke ngama-71% ngaphezulu konyaka ophelileyo.
Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba ezi ntengiso ziguquka njani. Kancinci kancinci siyabona indlela uHuawei azingela ngayo iSamsung Kwimarike yehlabathi. Ukutsiba kumgangatho weefowuni zabo, ngeemodeli eziphambili ezinjengeMate 20 Pro, incede ukuqhubela phambili kwakho kwimarike. Ngaba baya kuba nakho ukuyikhupha i-Samsung?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHuawei iyadityaniswa njengophawu lwesibini oluthengisa kakhulu